Mikasa, mizara, miara-miasa ary mizara asa famoronana | Martech Zone
Mikasa, mizara, miara-miasa ary mizara asa famoronana
Talata, Desambra 18, 2012 Talata, Desambra 18, 2012 Douglas Karr
Nanoratra momba izany izahay Digital Asset Management taloha. Widen, orinasa Digital Asset Management, dia niara-niasa tamin'ny ConceptShare. Ny fampiarahana ireo sehatra ireo dia ahafahanao manomana, mizara, miara-miasa ary mizara ny sanganasa noforoninao. Pairing tena tsara ity… ahafahan'ny fikirakirana workflow manodidina ny fananana nomerika rehetra - indrindra ny bandwidth lehibe, fizarana rakitra video be.
ConceptShare dia Fitantanana Operations Creative (COM) sehatra izay mamela ny ekipa serivisy marketing sy famoronana hitety, handinika, hiara-miasa ary hanaiky ny asa famoronana; sary, antontan-taratasy, pejin-tranonkala, fananana feo, fananana ifanakalozana ary fananana amin'ny horonan-tsary. Widen dia nanambatra ny Media Collective miaraka amin'ny ConceptShare mba hanolotra ity fitaovana mahery vaika ity ho an'ny mpanjifa Widen rehetra.
Hihamalalaka / ConceptShare Fampidirana workflow
Ny mpampiasa Widen dia mampakatra fananana amin'ny tranokala DAM
Misafidy ny handefa fananana (s) ho an'ny sehatr'asa misy azy ireo ny mpampiasa amin'ny ConceptShare avy amin'ny pejy Asset Details. Ny fahafahana mandefa fananana amin'ny ConceptShare dia avelan'ny Role.
Miditra ao amin'ny ConceptShare ny Administrator ary manomboka ny famerenana famerenana ny fananana (ao anatin'izany ny lalana, ny fanehoan-kevitra, ny fanamarihana, ny fankatoavana ary ny lalan'ny fanaraha-maso). Ireo mpampiasa manana tombony ara-pitantanana ConceptShare dia afaka mitantana ny mpandinika (izany hoe manasa olona haneho hevitra sy hanamarika ireo fananana ao amin'ny sehatr'asa.
Ny Asset dia novaina ivelan'ny ConceptShare araky ny hevitra sy ny markup natao nandritra ny fizotry ny famoronana famoronana
Ny fananana namboarina dia nakarina tao amin'ny ConceptShare. Manamarika ny fananana ny mpitantana nankatoavina or vita ny
Ny fananana nankatoavina dia averina amin'ny tranokala DAM an'ny mpampiasa
Fandaharana na hijerena a fampisehoana an'i Widen amin'izao fotoana izao.
Loza sy haino aman-jery sosialy